Happy New Year နှင့် နှစ်သစ်ကူးမှာ ပျော်ပါစေ | မျိုးမြင့်ချို | Burma Today - Articles
Happy New Year နှင့် နှစ်သစ်ကူးမှာ ပျော်ပါစေ
မျိုးမြင့်ချို၊ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၂
Happy New Year နှင့် နှစ်သစ်ကူးမှာ ပျော်ပါစေ - မျိုးမြင့်ချို (သရုပ်ဖော် - မြင့်လှိုင်)
ကျနော့်စာလေးတွေဖတ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သိလာခဲ့ရသည့် လူငယ်လေးတယောက်က "Hi!! Uncle Myo, Happy New Year" ဟု နှုတ်ဆက်လာ၏။ ကျနော်က "မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ" ဟု မြန်မာလို ပြန်ရိုက်တော့ "ဦးမျိုးကလည်းဗျာ၊ အမေရိကန်မှာနေပြီး အောက်လိုက်တာ၊ Same to you ဘာညာ ပြန်ပြောမှ မိုက်မှာပေါ့ ဗျ" ဟု ဆိုသဖြင့် ကျနော် ပြုံးမိလိုက်သည်။ ချက်ခြင်း မြန်မာဖေါင့် ပြန်ပြောင်းပြီး Same to you လိုက်ရ၏။ သူလည်း ကျေနပ်သွားပုံ ပေါ်၏။ ဘာမှ ဆက် မပြောတော့။ ဤတွင် ကျနော့်ခေါင်းထဲ တွေးစရာ ပေါ်လာ၏။ "သူ၊ ငါ့ကို မြန်မာ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့တုန်းက ဘယ်လိုများ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလိမ့်" ကို ပြန်သိချင်လာ၏။ သို့ဖြင့် သူနှင့်ကျနော် မနှစ်က လုပ်ခဲ့သည့် ချက်တင်န်း (Chatting) တွေကို ပြန်ရှာမိ၏။ မတွေ့။ မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့က သူနှင့်ကျနော် စကားမပြောဖြစ်ခဲ့။ ပြောဖြစ်ခဲ့ရင် "သူ၊ ငါ့ကို ဘယ်လိုများ နှုတ်ဆက်မှာပါလိမ့်" ဟု အတွေးက ဆက် ဝင်လာ၏။ ထိုကြောင့် ဤ စာ ရေးဖြစ်သွား၏။
ကျနော်သည် နေရာတကာ ပညာပေးတွေ များသည့်ခေတ်တွင် လူ ဖြစ်ပါသည်။ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ နယ်ပယ် တို့မှအစ ယုတ်စွအဆုံး အီးအီးကုန်းသည် အထိ။ ထို့ကြောင့်လား မသိ။ အရွယ်မရောက်ခင်ကပင် အုပ်မှည့်သီးလို ပိန်လှီရှုံ့တွကာ ပညာ ပြည့်ဝလာ၏။ ကမ္ဘာကြည့်ကြည့်မြင် ပညာတော့ မဟုတ်တန်ရာ။ နှလုံးလှ မလှ ကလည်း မသေချာ။
ကျနော်သည် တဖက်သတ်ဝါဒဖြန့်ချိမှု အားကြီးသည့်ခေတ်တွင် လူ ဖြစ်ပါသည်။ လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏ အညမညသဘောတရားမှသည် ပင်လယ်ငါးအထိ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထင်ပါသည်။ ဈေးကြီးသည့် ရေချိုငါးများကို မတတ်နိုင်သည့်အခါ ခေတ်မီအောင်ဆိုပြီး ပင်လယ်ငါးကို မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ချက်ပြုတ်စားကြ၏။ ၂၆ နှစ် ကြာတော့မှ အရသာကို သိရပါသည်။ မကောင်းဆိုတာတော့ သေချာပါသည်။
ကျနော်သည် သမဝါယမနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထခေတ်တွင် လူ ဖြစ်ပါသည်။ နဖူးကွဲဒူးပြဲ တန်းစီတိုးစားခြင်းကို ပြည်သူဆန်သည်ဟု ကြံဖန် ဂုဏ်ယူခိုင်းရာမှစကာ သူထဖို့ ကိုယ်ထူပေးရခြင်းအား ဝမ်းမြောက်တတ်အောင် အသင်ကြားခံရသည်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်သဖြင့် ကိုယ့်စားရိတ်နှင့်ကိုယ် ထောင်ကျရသည်ကိုပင် ကိုယ့်အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုတရပ်ဖြစ်သည်ဟု မထင်တတ်ခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ ကျေနပ်မိသလို ဖြစ်ခဲ့ဖူး၏။
ကျနော်သည် တူညီဝတ်စုံနှင့် စစ်ချီသီချင်းအား ကိုးစားယုံမှားသည့်ခေတ်တွင် လူ ဖြစ်ပါသည်။ ကြက်ခြေနီ၊ အရံမီးသတ်၊ လမ်းစဉ်လူငယ်နှင့် "ရဲရဲတောက် ဒို့ဗမာတွေ၊ သတ္တိခဲတွေ၊ ရာဇဝင်ထွန်းလောက်အောင် စွန့်ပေ" စသည်တို့နှင့် ယဉ်ပါးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ညီညွတ်ရေးဆိုလျှင် တသွေးတသံတမိန့်နှင့် အကြွင်းမဲ့ဖြစ်ရသည် ဟု သဘောပေါက်ခဲ့၏။ ရုပ်နှင့် စိတ်တွင် ဒဏ်ရာတွေများတော့မှ အမှားကောက် နားလည်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လာ၏။
ကျနော်သည် စနစ်တခုကို ပြောင်းပြန်လှန်ရာတွင် စစ်၊ တော်လှန်ရေး၊ သံနှင့် သွေး၊ လေးနှင့် မြားသာ အခရာဟု ဆိုသည့် ခေတ်စွန်ခေတ်ဖျားတွင် လူလားမြောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထင်၏။ ကျနော့်အတွေးတွင် ဥပဒေဆိုသည်ထက် တရားကို၊ လူဆိုသည်ထက် လူတန်းစားကို၊ လူထုဆိုသည်ထက် ပြည်သူကို၊ လှုပ်ရှားမှုဆိုသည်ထက် တိုက်ပွဲကို ပိုအလေးထား အလေးသာနေတတ်ပါသည်။
သို့နှင့် အတွေးက Happy New Year (ဟက်ပီး နျူးယီးယား) ကို ပြန်ရောက်လာပါသည်။ ကျနော့်ဘဝတွင် Happy New Year ဟု ပထမဆုံး စတင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ဖူးသည်မှာ ၁၉၉၈ ခုမှ ဖြစ်ပါသည်။ ထောင်ထဲတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမတိုင်ကတည်းက သင်္ကြန်အတက်နေ့ပြီး နောက်တနေ့သည် မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှန်းသိသလို ဇန်နဝါရီတရက်နေ့သည်လည်း အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ဖြစ်ကြောင်း သိပါသည်။ သို့သော် ထိုနေ့ နှစ်နေ့လုံးတွင် မည်သူ့ကိုမှ တခုတ်တရ "Happy New Year" ဟုလည်းကောင်း "မင်္ဂလာ နှစ်သစ် ပါ" ဟု လည်းကောင်း မနှုတ်ဆက်ခဲ့ဖူးတာ သေချာပါသည်။ ဘာ့ကြောင့် ထိုသို့ နှုတ်မဆက်ခဲ့ရတာလည်းဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးတော့လည်း အဖြေက ရေရေရာရာ မထွက်။ တခါတရံတွင် နှစ်တနှစ် ကူးသွားခြင်းဆိုသည်ကိုပင် မှတ်မှတ်ရရ မရှိသဖြင့် သိပင် မသိလိုက်ခဲ့။ သင်္ကြန်မှာ ရေကစားမည်။ ပျော်မည်။ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့သည် ကျနော့်အတွက် ထွေထွေထူးထူး ပျော်စရာမရှိလို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ ဇန်နဝါရီတရက်နေ့သည် အင်္ဂလိပ်တွေနှစ်ကူးတာ ငါနှင့်မဆိုင်ဟု ထင်ခဲ့မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်၏။ နှစ်တနှစ်က နောက်တနှစ်ကို ကူးသွားခြင်းသည် အထူးအဆန်း မဟုတ်၊ အရေးပါသည့်ကိစ္စမဟုတ်ဟု ထင်မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံး ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာတွေ မေးရင်းမေးရင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်နှစ်ကူးခြင်းအပေါ် ထားသည့် သဘောထား အတိမ်အနက်သည် ခေတ်နှင့်လည်း ဆိုင်သည်ဟု တွေးတောမိပြန်၏။ ကျနော်တို့ခေတ်က ငါးတန်းရောက်မှ အင်္ဂလိပ်စာ စသင်ရ၏။ အင်္ဂလိပ်စာမှတပါး ဘာသာရပ်တိုင်းလိုလိုလည်း မြန်မာလိုသာ အသင်ရ များ၏။ အင်္ဂလိပ်လို ကျင်ကျင်လည်လည် မပြောတတ်လည်း တက္ကသိုလ်တခုခုက ဘွဲ့တခုခု ဆွတ်ခူးနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာမတတ်လည်း ပညာတတ်ဆိုသည် ဖြစ်လို့ရ၏။ ထိုအထိ မဆိုးသေး။ သို့သော် မကောင်း။ ပိုဆိုးသည်က ရွယ်တူကျောင်းသားချင်း အပြင်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းတက်ပြီး နည်းနည်းပါးပါးပြောလျှင် "ဒီကောင်က ဒွတ်ဒက် ရွှတ်ရှက်တွေနဲ့ အတော် ဘိုလမ်းနီးတဲ့ ကောင်" ဟု အမနာပပြောတတ်ကြခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထိုကိစ္စကား အတော်ဆိုးသည်။ ဘာသာခြားစကားကို အထင်သေးခြင်းနှင့် သင်ယူသူအား နှိမ့်ချပြောဆိုမှုဟု ထင်၏။ အင်္ဂလိပ်စာသင်လျှင် အင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုပါ သင်ရတော့မည်။ သူ့ဘာသာစကားကို သင်ယူမည်ဆိုလျှင် သူ့ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်ရန်လိုခြင်းသည် အဆက်အစပ် ဖြစ်၏။ သို့မှာသာ သူ့စာ၏သဘောသွားကို မိမိရရ ဖမ်းမိဆုပ်မိ ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် သူ့ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခြင်းမှာမူ သီးခြားစီ ဖြစ်၏။ ကျနော်တို့ခေတ်သည် ကျနော်တို့ကို ထိုသို့မြင်တတ်အောင် သင်ပေးရမည့်အစား ဇာတိပုညဂုဏ်မာနတွေ သက်သက်ကိုသာ သိစေချင်ပုံ ရ၏။ ဂျပန်ဆိုလျှင် ဖက်ဆစ်နှင့် တွဲမြင်ခိုင်းပြီး အင်္ဂလိပ်ဆိုလျှင် ကုလားဖြူနယ်ချဲ့ဟုသာ ထင်စေချင်ပုံ ပေါ်၏။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု ဆန့်ကျင်မှ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းသူဟု ထင်လာအောင် အတင်းလုပ်ပုံ ပေါ်၏။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့ခေတ်က အင်္ဂလိပ်စာသည် စာတွင်ကျယ် မဟုတ်ခဲ့ရ၊ စာပန်းမလှ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထင်၏။ ထို့ကြောင့် ကျနော် ဇန်နဝါရီတရက်နေ့ကို Happy New Year ဟု နှုတ်မဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုလည်း ထင်မိပြန်၏။
အခုတော့ ခေတ်သည် ရွေ့လာပြီ ဖြစ်၏။ သည်အရွေ့သည် အကောင်းဘက်သို့၊ အသိပညာဘက်သို့ ရွေ့ခြင်းလည်း ဖြစ်နေ၏။ ခုတော့ လူငယ်တွေ အင်္ဂလိပ်စာတင်မက အခြားဘာသာခြားစာတွေပါ ပို သင်ယူလာသလို ပိုလည်း တတ်မြောက်လာကြသည်။ ဘာသာစကားများများ ပိုတတ်လေလေ အခွင့်အလမ်းများများ ပို ရှိလေလေ ခေတ်သို့ ရွေ့လာသည်ဟု လူငယ်တွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တွေးကြပြီ။ တိုင်းခြားစကားများကို တမြတ်တနိုး လေ့လာသလို မိခင်ဘာသာစကားကိုလည်း တလေးတနက် ရှိကြလိမ့်မည် ထင်သည်။ မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့တွင် မြန်မာလို "မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ" ဟုနှုတ်ဆက်ပြီး ဇန်နဝါရီတရက်နေ့တွင် "Happy New Year" ဟု နှုတ်ဆက်တတ်ကြသည့်ခေတ် ရောက်လာလိမ့်ဦးမည်ဟုလည်း တွေးမိ၏။
အခုတော့ ကျနော် လာမည့် မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ကို မျှော်နေမိလေပြီ။ လတန်ခူးလည်း မဝေးတော့ပြီ။ ထိုအချိန်တွင် အွန်လိုင်းပေါ်မှ ကျနော့်လူငယ်လေးသည် "မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကူးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဦးမျိုးရေ" ဆိုသည့် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးကိုလည်း မြန်မာလို စာရိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်လာလိမ့်မည်ဟု မရဲတရဲလေး မျှော်လင့်မိသလို နောင်နှစ် ဇန်နဝါရီတရက်နေ့တွင်လည်း "Hi!! Uncle Myo, Happy New Year" လို့ နှုတ်ဆက်လာလိမ့်မည်မှာ သေချာပါသည်။ သည်တခါတွင်တော့ ကျနော်လည်း သူ့ကို ပြန်ပြီး "မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ" ဟု ပြန်မပြောမိရန် သတိထားရပါလိမ့်မည်။
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် ၂၀၁၂
ရှုဒေါင့်အမြင် - Happy New Year နှင့် နှစ်သစ်ကူးမှာ ပျော်ပါစေ မျိုးမြင့်ချို - Feb 14 2012 03:02 PM EST